တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: Singapore မှ Australia သို့ (၂)
Singapore မှ Australia သို့ (၂)
ACS မတင်မီ Guideline ကို ကြေညက်စွာဖတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Guide Line: https://www.acs.org.au/assessment/docs/Current_PIMGuidelines.pdf
မိမိဘာသာပဲလုပ်လုပ် Agent နဲ့ပဲလုပ်လုပ် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- Personal Particulars များပါသော စာမျက်နှာများ
-Australia သွားဖူးထားလျှင် Australia immigration တံဆိပ်တုံးများ ပါဝင်သော စာမျက်နှာများ
2) Birth Certificate (မွေးစာရင်း နိုတြီ)
3) မူရင်းမွေးစာရင်း မြန်မာလို
4) Master Degree Certificate
5) Master Degree Transcripts
6) Bachelor Degree Certificate
7) Bachelor Degree Transcripts
မှတ်ချက်။ ။ ကျောင်းပြီးသော်လည်း ဘွဲ့ မယူရသေးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တို့မှ Letter of Completion ဖြင့်တင်ရန်
8) ဆယ်တန်း အောင်လက်မှတ် နိုတြီ
9) ဆယ်တန်း အောင်လက်မှတ် မြန်မာလို မူရင်း
10) ဆယ်တန်း အမှတ်စာရင်း နိုတြီ
11) ဆယ်တန်း အမှတ်စာရင်း မြန်မာလို မူရင်း
12) Professional Qualification Certificates (eg. MCSD certificate)
13) Professional Qualification Transcripts (eg. Exam Centre မှ Print ထုတ်ပေးသော ဘာသာတိုင်း ၏ အမှတ်စာရင်းများ)
14) အမည်ပြောင်းထားလျှင် ( အမည်ပြောင်းကြေညာချက် နိုတြီ နှင့် မူရင်း )
15) လက်ရှိ အလုပ်ရှင်ထံမှ Employment Letter (Full Name, Duration of Employment, Position, Detailed Job Descriptions, Duties, Scope of Work)
16) နောက်ဆုံး လစာထုတ်ပြေစာ (Payslip) ၃ လစာ (၃ ရွက်)
17) ယခင် အလုပ်ရှင်များ ထံမှ Employment Letter များ (Full Name, Duration of Employment, Position, Detailed Job Descriptions, Duties, Scope of Work)
Tips: Employment Letter များသည် Assessment Test လျှောက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ PR လျှောက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လွန်စွာအရေးကြီးလေသည်။ မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် MODL တွင်ပါဝင်နေလျှင် လျှင် 15 မှတ်ပိုရမည်။ MODL စာရင်းကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီ list ထဲမှာ မိတ်ဆွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုက အမှန်တကယ် ပါနေပါသလား? ပါနေပြီဆိုလျှင် မိမိကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပိုမိုပေါ်လွင်အောင် အထူး Highlight လုပ်ပြီး ရေးသားကြရမည်။ MODL စာရင်းကို ဒီမှာ ရှု။
ဥပမာ။ ။ C# သမားဖြစ်လျှင်Resume၊ နှင့် Employment Letter များ တွင် C# နဲ့ နှစ်တွေ အကြာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာပရောဂျက်တွေပြီးခဲ့တယ်၊ C# နဲ့ ဘာCertificate တွေရခဲ့တယ်၊ ဆိုတာ ပေါ်လွင်စွာ ထည့်ရေးရသည်။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီး ACS မှ MODL ဘောင်ဝင်မ၀င် ဆုံးဖြတ်မည်။
18) English လို အသေးစိတ်ရေးသားထားသော Resume (အလုပ်လျှောက်ရာတွင် သုံးသော Resume နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။)
19) Application Fee ($350 AUD) by Bank Draft
မှတ်ချက်။ ။ Bank Draft က ဘဏ် (DBS တို့ဘာတို့) မှာ မေးပြီးဝယ်လို့ရသည်။ ဘဏ်တွင် ဖောင်ဖြည့်ရမည်။ Payable နေရာတွင် Australian Computer Society ဖြည့်၊ Address တွင် LEVEL3, 160 CLARENCE STREET, SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA ဟူ၍ ဖြည့် ရပေမည်။ ငွေသားကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသည့် ချလံတစ်ခု ထုတ်ပေးသည်။ အဲဒါကို နောင်တွင် လျှောက်လွှာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ တင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ACS အောင်ပြီးနောက် PR လျှောက်လျှင် အထက်ပါစာရွက်စာတမ်း များအပြင် ထပ်မံလိုအပ်ချက်များ
1) IELTS အောင်လက်မှတ်
2) အိမ်ထောင်ရှိလျှင် လက်ထပ်စာချုပ် (နိုတြီ နှင့် မူရင်း)
3) 35mm x 45 mm ပတ်စပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံများ
စသည့် ကိုယ်ဘက်ကလုပ်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကြရမည်။
Posted by Philip Shield at 4:29 PM
it's quite valuable information! thanks for sharing.
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ဒီလို အချက်အလက်တွေ စုံစုံလင်လင် သိရလို့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ရှိသေးရင်လည်း ထပ်လုပ်ပါဦး။ ကျွန်တော်ကတော့ လတ်တလော သွားဖို့ မရှိသေးပေမယ့် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျောင်းပြီးလို့ အဲ့ဒီဘက်သွားချင်တဲ့လူတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါ့မယ်ဗျိုး။
For PR application, IELTS scores must need for everybody.
Phyo Wai Kyaw said...
As anticipated, Australia has raised the IELTS score for professionals like accountants and IT professionals. Fortunately, the change will take effect from 1 September 07. Currently, if you are an accountant or IT specialists, you may not need to score band6to qualify. However, from 1 September 07, you will need to score band6in all4categories. The points for English language proficiency will also be changed. Those who meet the threshold (band 6) will be given 15 points and those who exceed the threshold will be given 25 points. Under current system, applicants who score band5are given 15 points and 20 points if the score is band 6. Please note that skill assessment will take about3months. You can submit your PR application after the skill assessment result is known. If you wish to apply for Australia PR but have not started the process, we strongly recommend that you do so immediately. If your PR application is in process, please expedite the completion of the skill assessment and PR application without further delay.
Below is the extract of the announcement from Austraiia Department of Immigration and Citizenship:
Thanks so much for ur explanation! I will thoroughly read again.
Once you get PR approval, share us on the blog. We are waiting to hear the good news.
Hi Ko Phyo Wai Kyaw,
I am currently working in sg as software engineer for almost2yr++.
I am holidng bachelor of computer science from Myanmar and now attending Australia degree part time school in Singapore and finishing next year.
Can you suggest me, I should apply ACS with degree from Myanmar or should wait my current degree from Australia?
And you used agent for applying ACS and pr application? or only PR application?
When the time I had applied, Bachelor Degree from Myanmar is good enough. Read immi.gov.au for more detailed information since they are changing time to time. I had used agent "OCSC global".
Free IELTS Resources (books & audio)
Singapore မှ Australia သို့ (၁) "လူ့အလို နတ်မလို...
Corporate Lesson - 1
When Your Gone - Avril Lavigne
GTalk ရဲ့ theme ကို သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဖြင်...
အောင်သုခ ဓမ္မရ်ိပ်သာ (သန်လျှင်)
လိုချင်တာတွေ အားလုံးရှိလာမယ့် စုဘူးလေးပါ